Hologram-ka guriga lagu sameeyo: sida loo sameeyo matalaadan garaafka ah | Qalabka bilaashka ah
Xaqiiqdii waad aragtay hologram filimada kala duwan ee mustaqbalka, sida Star Wars, halkaas oo dadku iskood isugu abaabuli karaan iyagoo adeegsanaya holograafyadan si ay ula xiriiraan. Hagaag, hadda waxaad sidoo kale ku abuuri kartaa hologram-kaaga guriga lagu sameeyo qaab fudud, oo aan lahayn nidaamyo casri ah oo qaar uun laga heli karo.
Qodobkaan waxaad ku faahfaahin dheeraad ah og muxuu yahay holograamku, sidoo kale waa maxay ikhtiyaarrada lagu abuuri karo hologram gurigaaga lagu sameeyo, maadaama aad leedahay fursado dhowr ah, labadaba hadaad tahay wax sameeye sida haddii aad rabto wax horey loo soo saaray oo diyaar u ah in la isticmaalo ... Intaa waxaa dheer, waxaad ku dalban kartaa ujeedooyin fara badan, labadaba madadaalo iyo adeegsiga xarumaha waxbarashada si aad u muujiso naqshadaha jirka, walxaha, iwm.
1 Waa maxay hologram?
2 Sida loo abuuro hologram-ka guriga lagu sameeyo
2.1 Iibso mashruuc casriga ah
2.2 Iibso aaladda tijaabada ah ee hologram-ka
2.3 Abuur qalab hologram gurigaaga lagu sameeyo
Waa maxay hologram?
Un hologram, ama holography, waa farsamo casri ah oo ka kooban sameynta sawirro 3D ah oo ku saleysan isticmaalka nalka. Tan awgeed, habab kala duwan ayaa loo isticmaali karaa iyadoo la adeegsanayo taxane ah walxaha indhaha iyo ilaha iftiinka u oggolaanaya saadaasha sawirka iyo xitaa in la dhaqaajin karo.
Asalka farsamadan waa Hangari, oo ay hindisay fiisigiste Dennis Gabor sanadkii 1948. Tan darteed wuxuu ku heli lahaa abaalmarinta Nobel Prize ee Fiisikiska 1971. Hase yeeshe, weli waxay ahaayeen hologram aad u horumarsan. Ma noqon doono ilaa goor dambe, 1963, markii Emmett Leith iyo Juris Upatnieks, Mareykanka, iyo Yuri Denisyuk oo ka socda Midowgii Soofiyeeti, markii si wanaagsan loo qeexay holograamyo saddex-geesood ah.
Hadda, horumar badan ayaa laga gaadhay, oo waxaa jira teknoolojiyad kale oo iyagana siinaya natiijooyin rajo leh, gaar ahaan codsigooda qaybaha sida xaqiiqda la kordhiyay. Codsiyadooduna way kala duwanaan karaan, marka loo eego adeegsiga waaxda waxbarashada, xitaa bandhigyada, iwm.
Sida cad, Hologram-ka guriga lagu sameeyo in aad abuuri karto xoogaa wey xadidan tahay, laakiin wali waa mid aad u qurux badan ...
Sida loo abuuro hologram-ka guriga lagu sameeyo
Meel kale ma haysatid si loo abuuro hologram gurigaagaama, laakiin dhowr ah. Halkan waxaad ku haysaa xulashooyinka ugu xiisaha badan ee aan aadka qaaliga u ahayn. Waad dooran kartaa midka ugu habboon baahidaada ...
Ha iloobin in mid ka mid ah saddexda kiis waa inaad demisaa nalalka qolka si aad si fiican ugu arki karto sawirrada ...
Iibso mashruuc casriga ah
by in ka yar € 10 waxaad ka iibsan kartaa amazon midkood mashruucyada casriga ah. Iyada oo aad awoodi doontid inaad ku matasho dad badan oo ah 3D hologram shaashadda mobilada lafteeda. Natiijooyinka ayaa ah sawirro qurux badan oo 3D ah oo umuuqda inay dul sababayaan gudaha borojektar iyo shaashadda qalabka mobilada.
Way fududahay in la isticmaalo, iyo uma baahna nooc rakibid ah, qaabeynta ama isku imaatinka. Kaliya geli borojektar taleefankaaga casriga ah oo bilow inaad ku raaxeysatid hologram-ka guriga adoo adeegsanaya fiidiyowyo badan ama walxo aad ka heli doonto shabakadda, sida barnaamijyada sida YouTube.
Iibso aaladda tijaabada ah ee hologram-ka
Beddelka kale ee xoogaa xirfadeed oo leh xoogaa natiijooyin fiican, marka lagu daro soo saarista hologram waaweyn, waa helitaanka a Mashruuca hologram on Amazon. Qalabkani waa kharash in kabadan € 100, laakiin haddii aad jeceshahay sawirradan, waa u qalantaa inaad u isticmaasho xitaa jawiga ganacsiga, soo bandhigyada alaabada, xayeysiinta, iwm.
Mashruucani wuxuu ku saleysan yahay mabda 'aasaasi ah, wuuna soo jeesanayaa isagoo sii deynaya taxanaha nalalka LED-ka. Sidoo kale wuxuu leeyahay Isku xirnaanta WiFi si loogu xiro kombiyuutar u shaqeeya il ahaan, ama adoo u soo raraya kaarka xusuusta microSD illaa 16GB.
Abuur qalab hologram gurigaaga lagu sameeyo
Waxaa laga yaabaa inay tahay xulashada ugu shaqada badan, laakiin leh xoogaa natiijooyin ka xun kuwii hore. Wanaagga tan habka waa in ay ka jaban tahay iyo inaad adigu sameyn karto naftaada, haddii aad jeceshahay farsamada gacanta. Si aad u abuurto nidaam hologram gurigaaga lagu sameeyo, waxaad u baahan doontaa:
Caag adag oo hufan Waxay noqon kartaa xaashi methacrylate cad ah ama caag CD / DVD caag ah.
Magaabay, si loo gooyo caag ah.
Maqas, si loo jaro waraaqda loo isticmaalo qaab ahaan.
Cajalad dhejis ah, si aad ugu soo biirto qaybaha balaastigga, in kasta oo aad waliba isticmaali karto nooc kasta oo xabag ama dhejis ah.
Xaashida labajibbaaranaha oo laga soo qaatay buugga xusuusta, si loo fududeeyo naqshadeynta.
Qalin ama qalin wax lagu sawiro
Markaad intaas oo dhan haysato, tallaabada xigta waa inaad hesho aan yeelno sida aad ku arki karto fiidiyowga. Taasi waa, asal ahaan talaabooyinka la soo koobay waxay noqon doonaan:
Ku sawir qaabka trapezoid ee ku yaal xaashida. Dhinaca yar wuxuu noqon karaa 2 cm, dhinacyada 5.5 cm iyo salka 7 cm. Waad kala duwanaan kartaa cabirrada haddii aad rabto inaad sameyso nooc yar ama ka yar.
Hadda, jar trapezoid leh maqaska si aad ugu adeegsato qaab ahaan.
Ku dheji shaxanka warqadda balaastigga hufan ama CD-ga ah isla markaana ku jar qaab isku mid ah mindi koronto. Ka taxaddar inaadan faraha ka jarin hawsha.
Ku celi hawsha laga bilaabo tallaabada 3 si aad u hesho 4 trapezoid caag ah oo isku mid ah. Marka waa inaad haysataa bac balaastik ah oo kugu filan taas ...
Hadda, waxaad ku abuuri kartaa nooc Ahraam leh afarta trapezoid oo aad ku biiri kartaa geesaha dambe si aad u ilaaliso tiradaas. Waxaad isticmaali kartaa cajalad ama xabag.
Hadda, Ahraamtaas, waxaad lahaan doontaa shay la mid ah borojektarrada casriga ah ee aan horay u dhigay. Iyo shaqeynaya waxay la mid noqon doontaa:
Ku dheji Ahraamta rogay shaashadda kiniinka ama mobilka.
Daaro fiidiyoow ah hologram aad kahesho shabaq ama aad adigu sameysay.
Oo ku raaxee hologram-ka ...
Wadada buuxda ee maqaalka: Qalabka bilaashka ah » General » Hologram-ka guriga lagu sameeyo: sida loo sameeyo matalaadan shaxan